I-Ellicott® Brand Dredge Yakhelwe I-Titanium Dioxide Mining Project eFlordia- Ellicott Dredges
I-Mining Dredge enkulu eNyakatho Melika ukuya eMayini TiO2 eFlorida, e-USA eDuPont
Source: Imithombo Yezindaba Yezimayini
I-Ellicott Dredge yeDuPont - "SANDPIPER"
Ubude be-hull I-165 ft
Ubuningi obukhulu bokumba I-50 ft
Usayizi wepayipi lendalo I-23 ku-ID
Ungakanani usayizi wepayipi I-23 ku-ID
I-PP HP I-2,000 (1491 KW)
Umsiki we-HP I-1,450 (1081 KW)
Ingqikithi efakiwe ye-HP I-4,800 (3579 KW)
IDupont Inkampani yaseWilmington, i-DE, isebenzisa uhlobo olusha lomkhiqizo i-Ellicott® emayini yeTitanium Dioxide (TIO2) esifundazweni saseFlorida (e-USA). IDuPont ingumkhiqizi nomthengi ohamba phambili emhlabeni weTiO2, futhi ngenxa yesidingo esikhulayo sakamuva salesi simbiwa siqalise iphrojekthi yezigidi eziningi yokwandisa imisebenzi yayo yezimayini ngaseMaxville, eFlorida.
Ama-dredges amabili afakwe imishini yokucubungula amaminerali ayasebenza njengamanje emadepho aseduze kweTrail Ridge. Ngomshini omusha kanye nesitshalo esihambisanayo, iDuPont izokwelula impilo yezimayini iye onyakeni ka-2010. I-dredges iphampa izitshalo ezigxilisa amanzi ezihlukanisa i-TiO2 neminye imikhiqizo ehlukahlukene yamaminerali edonswa olwandle ukusuka kusixhumi. Manje sekuwumkhuba ojwayelekile ukuthi imisila iphinde ifakwe endaweni eyayakhiwe ngaphambili. Uhlelo olubhekwe ngokucophelela lwezemvelo luqinisekisa ukuthi indawo ekhishiwe ibuyiselwe ngangokunokwenzeka ekukhuphukeni kwayo kwasekuqaleni nasemgqeni.
I-dredge entsha, ebizwa nge- "SANDPIPER" izokhiqiza imisebenzi emibili ekhona ihlanganisiwe. Izosekelwa ogwini ngentambo kagesi engu-13,800-volt ehamba ngemuva futhi izokwakhiwa ukukhiqiza amathani ayi-2,100 / h we-TiO2 ore. Izopompa nge-600 ft of 23 in. Ipayipi le-ID esitshalweni se-concentrator, edonsela ekujuleni okuphezulu okungama-50 ft. Iphampu yesitebhisi se-HP engu-2,000 ne-1,450 HP basket cutter izoqhutshwa yi-line-shaft eqhutshwa ngama-motors amanje aqondile. Isiphakamisi sesitebhisi kanye namawingi e-swing nawo azohanjiswa ngama-DC motors. Izinhlelo ze-Ellicott's DC drive zihlinzeka ngolawulo olufanele lwemisebenzi eyinhloko yokwehlisa ngenkathi ihlinzeka ngokusebenza okuphezulu nokuthembeka. Ama-spuds azosebenza ngamasilinda wokubacindezela, futhi ikalishi elihamba ngesilinda elihamba nge-20-ft stroke lizosiza ukuhambisa.
Ishicilelwe kabusha kuMining Journal